Masar oo digniin dagaal oo kama danbaysa u dirtay Eithiopia QAAHIRA-(Berberanews)-Kulanka ugu dambeeya ee u dhaxeeya Masar, Sudan iyo Ethiopia ee biyo muranka xidheenka ay Ethiopia ka sameyneyso webiga Nile waa fursaddii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaadhi karo ka hor inta aanay Ethiopia dib u billaabin buuxinta biyo-xidheenka, waxaa sidaas bayaan ay soo saartay Axaddii ku sheegtay Masar. Kulanka ayaa Isniintii maanta kusoo geba-geboobaya magaalada Kinshasa. “Wada-xaajoodyadan waxay ka dhigan yihiin fursaddii ugu dambeysay ee ay tahay in saddexda dal ay ka faa’iideystaan si ay heshiis u gaadhaan….kahor xilliga daadadka,” ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Masar. Toddbaadkii tegay, madaxweynaha Masar, Abdel Fattah al-Sisi ayaa sheegay inay jiri doonto “xasillooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka,” haddii biyaha Masar ay hesho uu saameeyo biyo-xidheenka. “Ma jirto cid hal dhibic oo biyo ah ka qaadan karta Masar, cid kasta oo dooneysa inay isku daydana, ha isku daydo,” ayuu yidhi. “Cidna ma qiyaaseyso inay ka fog tahay awoodaheena,” ayuu yidhi Sissi. Sudan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduudda ah ay ka dhaxeysaa Ethiopia, taasi oo salka ku haysa dhul beereedka gobolka al-Fashaqa, waxaana Sabtidii ay dhoola-tus militari la sameysya Masar. Hadalka cusub ee Masar kasoo baxay, iyo kuwii uu toddobaadkii tegay jeediyey madaxweyne al-Sissi, ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka, waxaana taxliiliyayaasha siyaasadda ay rumeysan yihiin in haddii wada-hadallada Kinshasa ay guul-darreystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka. | Berberanews.com
Home WARARKA Masar oo digniin dagaal oo kama danbaysa u dirtay Eithiopia QAAHIRA-(Berberanews)-Kulanka...
Masar oo digniin dagaal oo kama danbaysa u dirtay Eithiopia QAAHIRA-(Berberanews)-Kulanka ugu dambeeya ee u dhaxeeya Masar, Sudan iyo Ethiopia ee biyo muranka xidheenka ay Ethiopia ka sameyneyso webiga Nile waa fursaddii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaadhi karo ka hor inta aanay Ethiopia dib u billaabin buuxinta biyo-xidheenka, waxaa sidaas bayaan ay soo saartay Axaddii ku sheegtay Masar. Kulanka ayaa Isniintii maanta kusoo geba-geboobaya magaalada Kinshasa. “Wada-xaajoodyadan waxay ka dhigan yihiin fursaddii ugu dambeysay ee ay tahay in saddexda dal ay ka faa’iideystaan si ay heshiis u gaadhaan….kahor xilliga daadadka,” ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Masar. Toddbaadkii tegay, madaxweynaha Masar, Abdel Fattah al-Sisi ayaa sheegay inay jiri doonto “xasillooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka,” haddii biyaha Masar ay hesho uu saameeyo biyo-xidheenka. “Ma jirto cid hal dhibic oo biyo ah ka qaadan karta Masar, cid kasta oo dooneysa inay isku daydana, ha isku daydo,” ayuu yidhi. “Cidna ma qiyaaseyso inay ka fog tahay awoodaheena,” ayuu yidhi Sissi. Sudan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduudda ah ay ka dhaxeysaa Ethiopia, taasi oo salka ku haysa dhul beereedka gobolka al-Fashaqa, waxaana Sabtidii ay dhoola-tus militari la sameysya Masar. Hadalka cusub ee Masar kasoo baxay, iyo kuwii uu toddobaadkii tegay jeediyey madaxweyne al-Sissi, ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka, waxaana taxliiliyayaasha siyaasadda ay rumeysan yihiin in haddii wada-hadallada Kinshasa ay guul-darreystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka.
QAAHIRA-(Berberanews)-Kulanka ugu dambeeya ee u dhaxeeya Masar, Sudan iyo Ethiopia ee biyo muranka xidheenka ay Ethiopia ka sameyneyso webiga Nile waa fursaddii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaadhi karo ka hor inta aanay Ethiopia dib u billaabin buuxinta biyo-xidheenka, waxaa sidaas bayaan ay soo saartay Axaddii ku sheegtay Masar.
“Wada-xaajoodyadan waxay ka dhigan yihiin fursaddii ugu dambeysay ee ay tahay in saddexda dal ay ka faa’iideystaan si ay heshiis u gaadhaan….kahor xilliga daadadka,” ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Masar.
Toddbaadkii tegay, madaxweynaha Masar, Abdel Fattah al-Sisi ayaa sheegay inay jiri doonto “xasillooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka,” haddii biyaha Masar ay hesho uu saameeyo biyo-xidheenka.
“Ma jirto cid hal dhibic oo biyo ah ka qaadan karta Masar, cid kasta oo dooneysa inay isku daydana, ha isku daydo,” ayuu yidhi. “Cidna ma qiyaaseyso inay ka fog tahay awoodaheena,” ayuu yidhi Sissi.
Sudan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduudda ah ay ka dhaxeysaa Ethiopia, taasi oo salka ku haysa dhul beereedka gobolka al-Fashaqa, waxaana Sabtidii ay dhoola-tus militari la sameysya Masar.
ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka
Biyo xidheenka itoobiya
cid kasta oo dooneysa inay isku daydana
ha isku daydo
iyo kuwii uu toddobaadkii tegay jeediyey madaxweyne al-Sissi
Previous articleFannaanka Ismaaciil Aar oo lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho
Next articleWaa goorma Ramadaan?